Mobian: chirongwa cheDebian porting chemafoni efoni | Linux Vakapindwa muropa
Mobian: chirongwa cheDebian porting chemafoni nhare
Vanogadzira chirongwa cheMobian vakafumura basa rake raakaitirwa kugadzira vhezheni yeDebian GNU / Linux yemafoni nhare, umo inovaka shandisa Debian's standard package base, iyo GNOME suite, uye Phosh mushandisi ganda (rakagadzirwa nePurism yeiyo Librem 5 smartphone). Nekudaro, Phosh yakavakirwa paGNOME matekinoroji (GTK, GSettings, DBus) uye inoshandisa iyo Phoc composite server inomhanya pamusoro peWayland.
Kusvika ikozvino Mobian kusvika parizvino yakazvigumira pakuvaka magungano chete iyo smartphone "PinePhone", iyo inoparadzirwa nenharaunda yePine64, kunyangwe ivo vasingatonge kunze mukana wekuwedzera mamwe mamodheru gare gare.
1 About Mobian
2 Dhawunirodha mufananidzo wePine Runhare
Mupurojekiti, inoratidza kusimudzira kwekushandisa kwakasiyana kwakapihwa, ayo ari iwo Ziso reGnome mufananidzo muoni, iyo GNOME ToDo inocherekedza system, iyo interface yekumisikidza GSM / CDMA / UMTS / EVDO / LTE modem ModemManager, iyo GNOME kero yekubata kero bhuku, ruzha kubva kuGNOME rwiyo rwekurekodha, GNOME Control Center chigadziriso , Evince gwaro rinoona, gedit zvinyorwa edhitaini, GNOME software application yekuisa maneja, GNOME Geary email chirongwa chevatengi, fractal messenger (zvichibva paMatrix protocol) kuongorora mashandisirwo, kufona kufona manejimendi (uchishandisa oFono foni stack).
Uyewo, Zvirongwa zvevaMobian zvinosanganisira kuwedzera kweMPD Mutengi, zvirongwa zvekushanda nemakadhi, mutengi weSpotify, zvirongwa zvekuteerera kumabhuku ehurukuro, nzira yemanheru, kugona kunyorera data padiski, pakati pezvimwe zvinhu zvimwe (uye nemukomana vanofanirwa, nekuti ivo vanofanirwa kushanda mukubatanidza akawanda maficha anozivikanwa, zvikasadaro iyo purojekiti inogona kuve nekwekuenda kwakafanana neFirefox OS).
Kune chikamu che iwo mafomu izvo zvatove zviripo, zvinotaurwa izvo dzakapetwa nezvimedu kubva muPurism chirongwa, iyo chinangwa ndechekuvandudza mashandiro eiyo interface pane zvidiki skrini.
Kunyanya, purism purojekiti iri kuvandudza raibhurari raibhurari ine seti yemawadhi uye zvinhu kugadzira mushandisi mushandisi. Iyo raibhurari inosanganisira makumi maviri neshanu mawadhiji anofukidza akasiyana chaiwo echimiro maficha senge rondedzero, mapaneru, edhi mabhuroko, mabhatani, tabo, mafomu ekutsvaga, emabhokisi ebhokisi, nezvimwe.
Iwo akajekeswa majeti anotendera kuumba kwepasirese nzvimbo iyo inoshanda zvine hunyanzvi pane ese mahombe PC uye malaptop skrini pamwe neadiki efoni yekubata skrini.
Iyo yekushandisa interface inoshanduka zvine simba zvinoenderana nesaizi size uye zviripo zvekushandisa zvekushandisa. Chinangwa chakakosha cheprojekti ndechekupa mukana wekushanda pamwe chete neGNOME kunyorera pane mafoni uye maPC.
Saizvozvo kune avo vanofarira chirongwa ichi, Unogona kuwana rumwe ruzivo nezvazvo mune rake zviri pamutemo webhusaiti kana mune mamwe midhiya senge Matrix, unogona zvakare kubvunza sosi kodhi muGitLab kana pairi wiki uko kwaunogona kuwana rumwe ruzivo.
Dhawunirodha mufananidzo wePine Runhare
Chekupedzisira, kune avo vanofarira vane Pine Runhare, vanogona kuwana mufananidzo weiyo system muchikamu chekurodha chewebhusaiti.
Kana kana uchida, unogona kuzviwana zvakananga kubva pane iyi link iripazasi.
Kuti ubvise iyo chifananidzo, unogona kuzviita nechero application yesarudzo yako kana kubva kumagumo nekuita chero yeanotevera mirairo:
Kana kamwe mufananidzo wegadziriro wawanikwa, unofanirwa kuiswa mukati mekadhi reSd kana zvakananga kune yemukati eMMC yekuchengetera (kunyangwe yekutanga sarudzo ichikurudzirwa).
Kuti uratidze mufananidzo weMobian, chishandiso chakabatana nechinangwa chinofanira kuzivikanwa.
Mune pinephone, tinogona kuwana mufananidzo munzira dzinotevera: / dev / mmcblk0 Kadhi re SD kana / dev / mmcblk2 yeMMC uye saizi yeMMC inofanira kunge iri 16GB.
Pakupedzisira iwe unofanirwa kupenya neinotevera kuraira
Mushure meizvozvo zvinokwanisika kuitisa kubva pachigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mobian: chirongwa cheDebian porting chemafoni nhare
Imwe nguva yapfuura ndakaona mukana weLibrem5 (PureOS) wakashushikana nekuda kwemitero uye hupenzi hwakasara mumutengo wekupedzisira. [€]
Kuverenga izvi kunoshamisa kwandiri, ndingade kuti chirongwa ichi chishande uye chinonyatsoshanda nemazvo! Ini handina basa nekuisa yangu yekupedzisira nhare panjodzi kana ndine mukana wekuisa DebianPhone XD mairi
Pindura ku qtrit
Linux 5.8: iyo hombe vhezheni yenguva dzese